ပိုက်ဆံ(၃)သိန်းပြန်တောင်းတဲ့အကြောင်းအရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရေမွန်ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို ဖြေရှင်းလာပြန်တဲ့ ရေမွန်ရဲ့ ချစ်သူ ကေ – Cele Snap
အဆိုတျောရမှေနျကတော့ လှနျခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးလေးကမှ ငှကျဖြားရောဂါနဲ့ဆုံးပါးပွီးနောကျပိုငျးမှာတော့ မိသားစုမြားနဲ့ ပရိသတျတှကွေားမှာ အရမျးကိုဝမျးနညျးစရာလေးတှေ ခံစားခဲ့ကွရပါတယျ။ ရမှေနျရဲ့နောကျဆုံးခရီးကိုလညျး ခဈြသူဖွဈသူ ကေ ကလိုကျပါပို့ဆောငျခွငျးမရှိတဲ့အပျေါမှာလညျး သူမကတော့တိတျဆိတျနပွေီး သူမရဲ့ မိခငျဖွဈသူကသာ ဖွရှေငျးလာခဲ့ပါ တယျ..
သူမ ကခဈြသူသဆေုံးထားပွီး ခံစားရလှနျးလို့ အဖြား ၁၀၂ ရှိနလေို့ပါဆိုပွီး ဖွရှေငျးလာတော့လညျး ပရိသတျတှကေ နားလညျပေးခဲ့ကွပွနျပါတယျ။ ဒီနလေ့ေးမှာ ဖွဈခဲ့တဲ့ ကိစ်စလေးကတော့ သူမကို မိသားစုအပေါငျးအသငျးမြားအပါအဝငျ ပရိသတျမြားကပါ လကျမခံနိုငျတဲ့အထိ ဖွဈသှားခဲ့ရပါတယျ. ခဈြသူ ကကေ ရမှေနျမသဆေုံးခငျမှာ Bar မှာသှားရငျ သုံးဖို့ဆိုပွီး ဟော့ပေါ့ဖိုး ငှသေား ၃ သိနျးနဲ့ ဖုနျးကို လကျဆောငျအနနေဲ့ ပေးထားခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ ခဈြသူသဆေုံးပွီးလို့ ရကျတောငျမလညျသေးဘဲနဲ့ ရမှေနျ မိခငျနဲ့ ညီမဖွဈသူဆီကနေ အကွှေး ပွနျတောငျးတယျလို့ သတငျးတှထှေကျပျေါလာခဲ့ပါ တယျ။
ကကေ ပိုကျဆံပွနျတောငျးရတဲ့အကွောငျးရငျးကိုလညျး “ကပေို့ကျဆံလညျးမဟုတျပါဘူး အဲ့ ၃သိနျးကကလညျး မတောငျးမိပါဘူးတကယျ့ လူရငျးတှပေါ ကေ့ ပျေါ အထငျလှဲ တာ သိရတော့ တကယျစိတျမကောငျးဘူးသိခငျြရငျ လာမေးလို့ရပါတယျ… အသံဖိုငျလညျး ရှိပါတယျ ဖုနျးတောငျးတယျဆိုတာလညျး သူ့ညီမလေးဆီက ၁ရကျပဲတောငျးတာပါ နှဈယောကျ ဓါတျပုံနဲ့ video လေး တှကေူးခငျြလို့ပါ.ရကျတောငျမလညျသေးဘူး ဒါမြိုးတှေ တောကျလြောကျဖွဈနတေဲ့ အတှကျ တကယျစိတျ မကောငျးပါဘူး
အခု ဒီကိစ်စမှာ အထငျလှဲသှားရငျ အနျတီရော ညီမလေးရော band က သူတှကေော အကုနျလုံးကို ကေ အားနာပါတယျ…” လို့ ဖွရှေငျးထားခဲ့ပမေဲ့ သူမက ပရိသတျတှကေောမနျ့မှာလညျး မေးလို့မရအောငျ ကောမနျ့ပိတျပွီး ဖွရှေငျးလာတာ ဖွဈတဲ့အတှကျ မကမြေနပျတှေ ဖွဈနခေဲ့ကွပွနျပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာတော့ ခဈြသူရမှေနျ ရကျလညျတဲ့နဖွေ့ဈပွီး သူမကထပျမံပွီးတော့“အလကားနေ အလကားး blame ခငျြနသေူတှရေဲ့ အမွငျမှာတော့ စောငျကွှေးတောငျးတယျပေါ့လေ… တကယျက ကို့ကို့ကို သံသရာအကွှေး မပါစခေငျြတာပါ .. ခဈြတယျကိုကို ” လို့ရေးသားပွီး profile lock ခသြှားခဲ့ပါ တယျ။ ..
အဆိုတေ်ာရေမွန်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းလေးကမှ ငှက်ဖျားရောဂါနဲ့ဆုံးပါးပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ မိသားစုများနဲ့ ပရိသတ်တွေကြားမှာ အရမ်းကိုဝမ်းနည်းစရာလေးတွေ ခံစားခဲ့ကြရပါတယ်။ ရေမွန်ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုလည်း ချစ်သူဖြစ်သူ ကေ ကလိုက်ပါပို့ဆောင်ခြင်းမရှိတဲ့အပေါ်မှာလည်း သူမကတော့တိတ်ဆိတ်နေပြီး သူမရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူကသာ ဖြေရှင်းလာခဲ့ပါတယ်..
သူမ ကချစ်သူသေဆုံးထားပြီး ခံစားရလွန်းလို့ အဖျား ၁၀၂ ရှိနေလို့ပါဆိုပြီး ဖြေရှင်းလာတော့လည်း ပရိသတ်တွေက နားလည်ပေးခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။ ဒီနေ့လေးမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စလေးကတော့ သူမကို မိသားစုအပေါင်းအသင်းများအပါအဝင် ပရိသတ်များကပါ လက်မခံနိုင်တဲ့အထိ ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်. ချစ်သူ ကေက ရေမွန်မသေဆုံးခင်မှာ Bar မှာသွားရင် သုံးဖို့ဆိုပြီး ဟော့ပေါ့ဖိုး ငွေသား ၃ သိန်းနဲ့ ဖုန်းကို လက်ဆောင်အနေနဲ့ ပေးထားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ချစ်သူသေဆုံးပြီးလို့ ရက်တောင်မလည်သေးဘဲနဲ့ ရေမွန် မိခင်နဲ့ ညီမဖြစ်သူဆီကနေ အကြွေး ပြန်တောင်းတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ ပါတယ်။
ကေက ပိုက်ဆံပြန်တောင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်း “ကေ့ပိုက်ဆံလည်းမဟုတ်ပါဘူး အဲ့ ၃သိန်းကကလည်း မတောင်းမိပါဘူးတကယ့် လူရင်းတွေပါ ကေ့ ပေါ် အထင်လွဲ တာ သိရတော့ တကယ်စိတ်မကောင်းဘူးသိချင်ရင် လာမေးလို့ရပါတယ်… အသံဖိုင်လည်း ရှိပါတယ် ဖုန်းတောင်းတယ်ဆိုတာလည်း သူ့ညီမလေးဆီက ၁ရက်ပဲတောင်းတာပါ နှစ်ယောက် ဓါတ်ပုံနဲ့ video လေး တွေကူးချင်လို့ပါ.ရက်တောင်မလည်သေးဘူး ဒါမျိုးတွေ တောက်လျောက်ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် တကယ် စိတ်မကောင်းပါဘူး
အခု ဒီကိစ္စမှာ အထင်လွဲသွားရင် အန်တီရော ညီမလေးရော band က သူတွေကော အကုန်လုံးကို ကေ အားနာပါတယ်…” လို့ ဖြေရှင်းထားခဲ့ပေမဲ့ သူမက ပရိသတ်တွေကောမန့်မှာလည်း မေးလို့မရအောင် ကောမန့်ပိတ်ပြီး ဖြေရှင်းလာတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မကျေမနပ်တွေ ဖြစ်နေခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ချစ်သူရေမွန် ရက်လည်တဲ့နေ့ဖြစ်ပြီး သူမကထပ်မံပြီးတော့“အလကားနေ အလကားး blame ချင်နေသူတွေရဲ့ အမြင်မှာတော့ စောင်ကြွေးတောင်းတယ်ပေါ့လေ… တကယ်က ကို့ကို့ကို သံသရာအကြွေး မပါစေချင်တာပါ .. ချစ်တယ်ကိုကို ” လို့ရေးသားပြီး profile lock ချသွားခဲ့ပါ တယ်။ ..